Alzheimer ọgwụ (AD ọgwụ) ndị na-aga ime: J147, CMS121, CAD31
/blog/J147/Alzheimer ọgwụ (AD ọgwụ) ndị na-aga ime: J147, CMS121, CAD31
Ihe na 07 / 10 / 2018 by 阿斯劳 dere na J147.
Kedu ihe Alzheimer na Geroprotectors (GNPs)
Alzheimer bụ ihe kachasị akpata isi mgbaka, bụ ụdị isi mgbaka nke na-akpata nsogbu na ncheta, echiche na omume. Mgbaàmà na-etolite nwayọ nwayọ ma na-akawanye njọ karịa oge, na-agbasi ike iji gbochie ọrụ kwa ụbọchị.Ọrịa Alzheimer edere 60 pasent na 80 pasent nke ikpe ikpe. Na ịka nká bụ ihe kachasị ize ndụ maka ọtụtụ ọrịa, gụnyere ọrịa Alzheimer (AD) na kansa.
Geroprotectors, ọ bụ ihe ọmụmụ nke na-achọ ịmetụta nsogbu kpatara ịka nká na ọrịa ndị metụtara afọ, ma si otú ahụ mee ka ndụ ụmụ anụmanụ dịkwuo ogologo. Nyocha ọhụrụ Salk achọpụtala ihe dị iche iche pụrụ iche nke ogige ndị a, ndị a na-akpọ geroneuroprotectors (GNPs), bụ ndị na-achọ ọgwụ ọgwụ nje AD ma mee ka usoro ịka nká na-arụ ọrụ na ụmụ oke.
Ihe kpatara ọrịa Alzheimer
Ndị ọrụ nyocha kwenyere na ọ nweghị otu ihe kpatara ọrịa Alzheimer. Kedu ka ị si enweta ọrịa Alzheimer? O nwere ike ibute ọrịa a site n'ọtụtụ ihe, dịka mkpụrụ ndụ ihe nketa, ibi ndụ na gburugburu ebe obibi. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo ihe ndị na-eme ka Alzheimer dịkwuo ukwuu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe egwu - afọ, akụkọ ntolite ezinụlọ na ihe nketa - enweghị ike ịgbanwe, ihe akaebe na-egosi na enwere ike ịnwe ihe ndị ọzọ anyị nwere ike ịgbanwe
Ihe kachasị ama maka ọrịa Alzheimer na-eto eto, mana Alzheimer abụghị akụkụ nke ịka nká. Mgbe afọ na-abawanye n'ihe egwu, ọ bụghị ya bụ ihe kpatara ọrịa Alzheimer.
Imirikiti ndị nwere ọrịa ahụ bụ 65 na okenye. Mgbe afọ 65 gachara, ihe egwu nke Alzheimer na-agba okpukpu abụọ kwa afọ ise. Mgbe afọ 85 gachara, ihe egwu a ruru ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ.
-Akwụkwọ akụkọ ezinụlọ
Ihe ọzọ dị ize ndụ bụ akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ. Ndị nwere nne ma ọ bụ nna, nwanne ma ọ bụ nwanne Alzheimer nwere ike ịmalite ọrịa ahụ. Ihe ize ndụ na-abawanye ma ọ bụrụ na ihe karịrị otu onye òtù ezinụlọ nwere ọrịa ahụ.
Ndị ọkà mmụta sayensị maara na mkpụrụ ndụ ihe nketa dị na Alzheimer. Akụkụ abụọ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa na-emetụta ma mmadụ ọ na-ebute ọrịa: mkpụrụ ndụ ihe ize ndụ na mkpụrụ ndụ gọọmenti.
E nwere njikọ dị n’etiti mmerụ isi na ihe egwu dementia n’ọdịnihu. Chebe ụbụrụ gị site na ịjikọ eriri oche gị, kpu okpu gị mgbe ị na-eme egwuregwu, na "ịda ada" n'ụlọ gị.
- Njikọ isi isi
Ụfọdụ n'ime ihe kachasị ike na-emetụta ụbụrụ na ahụ ike. Njikọ a dị nro, n'ihi na ụbụrụ na-edozi ya site na otu n'ime ọnụọgụ kasị baa ọgaranya nke arịa ọbara, obi dịkwa mkpa maka ịmịnye ọbara site na arịa ọbara ndị a na ụbụrụ.
Taa, Alzheimer bụ mmalite nke nchọpụta biomedical. Ndị nchọpụta na-arụ ọrụ iji kpughee ọtụtụ akụkụ nke ọrịa Alzheimer na nsogbu ndị ọzọ dị ka o kwere mee. Fọdụ n'ime ọmarịcha ọganihu emeela ka a mata etu Alzheimer si emetụta ụbụrụ. Olileanya bụ na nghọta a ka mma ga-eduga na ọgwụgwọ ọhụrụ. A na-enyocha ọtụtụ ụzọ nwere ike ịbịaru ugbu a n'ụwa niile.
Laboratory Cell Neurobiology Salk malitere site na chemical abuo nke achoputaworo na osisi ndi gosiputara ihe ndi ogwu: anu uzo, ihe okike sitere na nkpuru na akwukwo nri, na curcumin, site na mgbochi turryic. Site na ndị a, ìgwè ahụ mejupụtara atọ AD ọgwụ ndị na-eme nke a dabeere na ike ha ichebe ndị na-adịghị na ụbụrụ na-akpata ọtụtụ ụbụrụ. Ụlọ nyocha ahụ gosiri na ndị omempụ atọ a na-eme ihe nkiri (nke a maara dịka CMS121, CAD31 na J147), yana fisetin na curcumin, belata akara akara ala nke ịka nká, yana nkwarụ, ma gbasaa ụmụ oke ma ọ bụ ijiji.
N'ụzọ dị oke mkpa, ìgwè ahụ gosipụtara na ụzọ okporo ụzọ ndị ndị a na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe ndị a bụ otu ihe ahụ dịka abụọ ndị ọzọ na-emepụta ọgwụ synthetic composite nke a maara iji gbasaa ọtụtụ anụmanụ. N'ihi nke a, ma dabere na nsonazụ ọmụmụ ha gara aga, òtù ahụ kwuru na azụ azụ, curcumin na atọ AD ndị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ niile na-akọwa nkọwa nke ịbụ ndị na-eme ihe na-egosi na ha bụ geroneuroprotectors.
Nnyocha ndị ọzọ na ụlọ nyocha na-achọpụta ma ogige ndị a nwere mmetụta n'ahụ akụkụ ndị dị n'èzí ụbụrụ. "Ọ bụrụ na ọgwụ ndị a nwere abamuru maka usoro ahụ ndị ọzọ, dị ka ịnọgide na-arụ ọrụ akụrụ na ahụ ike ahụ dum, a pụrụ iji ha mee ihe ndị ọzọ iji mesoo ma ọ bụ gbochie ọrịa nke ịka nká," ka Schubert na-ekwu.
- Ọgwụ Alzheimer (AD ọgwụ) ndị chọrọ: J147
Curcumin, bụ isi ihe ntanetị nke turmeric nke India, bụ ihe dị iche iche nke na-ebelata mbufụt, mmepụta ROS, ọgwụ mgbu amyloid, na excitotoxicity, ma dị nnọọ irè n'ụdị ụdị nke AD. Otú ọ dị, curcumin nwere ọrụ nlekọta na-adịghị mma, ogbenye bioavailability, na ịda ogbenye ụbụrụ. Iji meziwanye ihe ndị na-eme na nhụjuanya na nkwụsi ike nke curcumin, anyị na-eji sist ekpuchi kemistụ ọhụụ iji meziwanye ihe ndị na-emepụta ọgwụco ma n'otu oge ahụ na-amụbawanye ike ya na akụkụ nke ọrụ ya. Na mbido, a na-agbanwe usoro ihe omume nke curcumin nke ọma na pyrazole iji mee ka CNB-001, nwee nkwalite siri ike na ọrụ neuroprotective n'elu curcumin. Nnyocha nke usoro nke ndị dị iche iche na atọ phenyl yiri nke CNB-001 kpughere na ìgwè dị iche iche hydroxl adịghị mkpa maka ọrụ na nyocha asaa ahụ. Mgbakwunye nke abụọ methyl dị iche iche na pyrazole mmasị phenyl mgbanaka mere ka CNB-023 na ike mma n'elu CNB-001. Otú ọ dị, CNB-023 bụ oke lipophilic (cLogP = 7.66), na ogige nwere lipophilicity dị elu nwere ọtụtụ ụgwọ. Iji belata lipophilicity ma chọpụta ihe ndị a chọrọ iji rụọ ọrụ, e wepụrụ otu n'ime òtù cinnamyl abụọ ahụ ma nwekwuo njikarịcha na-eduga na obere ngwongwo nta J147. J147 bụ 5-10 ugboro kachasị ike na nyocha niile nke nyocha dị ka CNB-001, ebe curcumin nwere obere ọrụ ọ bụla ma ọ bụ enweghị ihe ọ bụla. J147 abụghị naanị nke nwere ike ma ọ nwere ezigbo physicochemical properties (MW = 350, cLogP = 4.5, tPSA = 42). J147 (1146963-51-0) amụwo ọtụtụ n'ime ndị nkịtị na AD dịka ebe ọ nwere nrụpụta ọgwụgwọ dị mma.
Onye na-echegbu onwe ya nke na-eme J147 nwere ike iweda ya na amines aromatic / hydrazines nwere ike bụrụ carcinogenic. Iji chọpụta ihe a, enwere ike ịmachi J147 metros na microsomes, na plasma òké, na vivo. E gosipụtara na J147 (1146963-51-0) adịghị emerụ na amines aromatic ma ọ bụ hydrazines, na scaffold ahụ bụ nke na-enweghị ike, nakwa na a gbanwere ya na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ metabolite oxidative n'ime ụmụ mmadụ, òké, oke, oke, na ụmụ nje microsomes. Iji nyochaa nchekwa nke ndị metabolite a, anyị agwakọtala ụmụ mmadụ atọ na-edozi microsomal metabolites ma gbakwaa ha ume maka ọrụ ndụ na mmekpa ahụ neuroprotection. Ọ dịghị onye n'ime ndị a metabolite na-egbu egbu, ọtụtụ n'ime ndị metabolites nwere ihe ndị dị ndụ yiri nke J147.
- Ọgwụ Alzheimer (AD ọgwụ) ndị chọrọ: CMS121
CMS121 bụ ihe ntụgharị nke ụzụ. N'ime afọ ole na ole gara aga, anyị egosila na flavonoid fisetin bụ ọnụ na-arụsi ọrụ ike, nke na-adịghị ahụkebe, na mkpụrụ ndụ na-eme ka cognition nwee ọtụtụ ụdị anụmanụ nke nsogbu CNS. Fisetin nwere ọrụ antioxidant kpọmkwem ma nwee ike jigide ogo intracellular nke GSH n'okpuru nrụgide. Na mgbakwunye, fisetin nwere ọrụ neurotrophic na mgbochi mkpali. Omume a dịgasị iche iche na-egosi na fisetin nwere ikike iji belata ọnwụ nke ọrụ akwara ozi metụtara ọtụtụ nsogbu. Otú ọ dị, EC50 dị elu dị na nyocha ndị dabeere na cell (2-5 μM), obere lipophilicity (cLogP 1.24), nnukwu tPSA (107), na ịda ogbenye bioavailability nwere obere fisetin maka inwekwu mmepe dị ka onye na-a drugụ ọgwụ.
Ihe ịma aka ahụ bụ imeziwanye ike nke fisetin n'ọtụtụ ụzọ neuroprotective ma n'otu oge ahụ na-agbanwe ihe onwunwe physicochemical iji kwekọọ na nke ọgwụ CNS na-aga nke ọma (molekụla arọ ≤ 400, cLogP ≤ 5, tPSA ≤ 90, HBD ≤ 3, Ejiri ụzọ abụọ dị iche iche iji meziwanye fisetin. Na nke mbụ, a gbanwere ụdị hydroxyl dị iche iche n'usoro usoro iji kpochapụ ndị nwere ike ime sulfate / glucuronidate metabolites. Na ụzọ nke abụọ, a gbanwere flavone scaffold ka ọ bụrụ quinoline, ma n'otu oge ahụ na-ejigide ihe ndị bụ isi nke fisetin. nnwale vitro ischemia. A nọgidere na-arụ ọrụ atọ nke fisetin na ihe ndị ọzọ, gụnyere mmezi nke GSH, igbochi nje lipopolysaccharide (LPS) na-ebute mmegharị microglial, na PC7 cell dị iche iche, usoro nke ọrụ neurotrophic. Ihe Flavone na-emepụta CMS-12 na quinolone nke CMS-140 bụ 121 na 600 ugboro dị ike karị, karịa fisetin na nnwale ischemia (ọgụgụ . Ya mere, ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-enwe ọtụtụ ọrụ nke polyphenol ka ị na-emezi usoro ọgwụ na ọgwụ nke ọgwụ.
- Ọgwụ Alzheimer (AD ọgwụ) ndị chọrọ: CAD31
Ihe omuma ihe omuma nke CAD31 bu ihe di mma n'igosi ufodu ihe ojoo na aru ndi aru na aru neurodegenerative.
CAD31 bụ ọrịa ọgwụ Alzheimer (AD) nke ahọpụtara na-adabere n'ikike ya iji kpalite mmeghari nke mkpụrụ ndụ embrayo nke mkpụrụ ndụ na-enweta neral preursor yana APPswe / PS1ΔE9 AD ụmụ oke. Iji bugharịa CAD-31 gaa n'ụlọọgwụ ahụ, e mere nyocha iji chọpụta njirimara ya na ọgwụ na ọgwụ, yana iji chọpụta nrụpụta ọgwụgwọ ya na usoro oke siri ike nke AD.
CAD31 nwere ihe ndị na-adịghị ike na-adịghị ahụkebe na nyocha isii nke mkpụrụ ndụ nerve dị iche iche nke na-emetụta ihe ndị dị na ụbụrụ ochie. Usoro ọgwụ na ịmalite ọmụmụ ihe na-egosi na CAD31 bụ ụbụrụ na-echekwa na ọ ga-adị mma. Mgbe a na-enye ndị okenye nsogbu, APPswe / PS1ΔE9 AD na-amalite na ọnwa 10 maka ọnwa 3 na usoro ọgwụgwọ ọrịa ahụ, enwere mbelata na ụbụrụ nchekwa na ụbụrụ ụbụrụ, yana mmụba nke okwu nke synaptic protein. Ihe omuma metabolic nke nta site na ụbụrụ na plasma gosipụtara na mmetụta bụ isi nke CAD-31 na-adabere na abụba acid metabolism na mbufụt. Nchịkọta ụzọ nke usoro okwu mkpụrụ ndụ na-egosi na CAD-31 nwere mmetụta dị ukwuu na nzụlite ahụike na usoro AD metabolic.
Ugbua ndi oru ugbua na-eleba anya n'inwe GNP abua n'ime ule mmadu. Ngwurugwu fisetin, CMS121, dị ugbu a n'ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ na-achọ iji nweta nkwenye FDA iji malite nrụgide ahụike. The curcumin mmegharị, J147, dị n'okpuru nyocha FDA maka nkwụnye ụgwọ maka ịmalite ọnwụnwa ọnwụnwa maka AD n'oge n'afọ ọzọ. Ndị otu a na - eme atụmatụ itinye ihe nrịbama biochemical maka ịka nká n'ime ọnwụnwa ndị na - ahụ maka nsogbu ndị nwere ike ịmalite .Ọfị ndị nchọpụta na - ekwu na nchọpụta nke ndị a na - achọ ọgwụ ọgwụ ndị a na - akwado akara ngosi ọgwụ ahụ ha mepụtara dịka ụzọ dị mma iji chọpụta ihe ndị ọzọ GNP ogige nke ga - enyere aka ịka nká. Nke a nwere ike mee ka ngwongwo dị ngwa mee ngwa ngwa maka ọgwụ ọjọọ iji mesoo ọrịa nke ịka nká nke a na-adịghị agwọta ugbu a.
Ihe kachasị iwebata maka Megestrol acetate ntụ ntụ Levonorgestrel: Ọ na - arụ ọrụ, ojiji, mmetụta ndị ọzọ